မိညီမ ဆိုသည်​မှာ ၃ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » မိညီမ ဆိုသည်​မှာ ၃	23
မိညီမ ဆိုသည်​မှာ ၃
Posted by ムラカミ on Feb 5, 2015 in My Dear Diary | 23 comments
ကျ​နော်​က ခီညားတို့သိတဲ့အတိုင်း ဘယ်​သန်​
အိမ်​ကကားက ညာ​မောင်း​လေ ဒင်းကိုတင်​ပြီး အပြင်​သွားတိုင်း စိကလက်​ညာနဲ့​သောက်​ဖို့​လေ့ကျင့်​ထားရတာ​ပေါ့
ချစ်​ဖို့တကယ်​​ကောင်းခဲ့ပါတယ်​ အမြဲတမ်း အား​ပေး​လေ့ရှိတယ်​
နာမည်​ကြီးအသည်းဆရာဝန်​တေ​ယောက်​ရြဲ့ အစစ်​စတန့်​ လုပ်​တယ်​​လေ
အရက်​သမားကုတဲ့ဆရာဝန်​ဆိုပြီး​ခေါ်​တော့ ကျ​နော့်​ကို ဂျပန်​အထိဖုန်းဆက်​ဆဲတယ်​
ကျုပ်​ကိုသာဆဲတာ ကျန်​ကိုယ်​​တော်​​လေးနဲ့ကျ အ​တော်​အဆင်​​ပြေသဗျ
မုန့်​ထွက်​စားရတာနဲ့ ကားပတ်​စီးရတာနဲ့ မသူ​တော်​အချင်းချင်းကြည်​ညိုဂျတယ်​
မာမီ့ကို စမတ်​ဖုန်းနဲ့ ​အွန်​လိုင်းသုံးတတ်​​အောင်​သင်​တာလည်း ဒင်းပဲ​လေ
သူမထိုးရက်​လို့ တခြားတ​ယောက်​ကိုထိုးခိုင်းပြီး ​ချောင်​ထဲမျက်​ရည်​ကျ​နေတာ​လေ
ကျုပ်​ငယ်​ငယ်​က စိတ်​ဆိုးတိုင်းဒင်းပုံ ကာရီကာချာဆွဲပီးဟားဖူးတယ်​
ကျ​နော်​ အ​ရှေ့ကျွန်းသွား​တော့ တနှစ်​စာအိမ်​သုံး​ဆေးအကုန်​ထည့်​​ပေးတယ်​​လေ
ခနခန သတ်​မယ်​ချိန်း​ခြောက်​ဖူးတယ်​ စိတ်​ဆိုးတိုင်း
တကယ်​​တော့ သူသတ်​ရင်​ကျ​နော်​​သေခဲ့တာ ကြာပါပြီ
အလင်းဆက် says: ဘာများလဲလို့… (၃)
ဖားသက်ပြင်း says: ​သောက်​​ကောင်​မ ပါးပိတ်​ချမှာ​ညော်​
Ma Ei says: မိညီမ တစ်ထောင့်တစ်ည ပုံပြင်များ ဆိုပြီး ဘုတ်အုပ်ထုတ်နော်…
မြစပဲရိုး says: Well … I think …. those re-reading one may last until starting another new chapter.
Let’s see. lol:-)))))
But … good to read anyway. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: ဇာတ်လမ်းက ဘယ်လိုမှ လွမ်းစရာ မ ကောင်းပါဘူး။
မင်းသမီး က လင် ယူပြီး သမီးလေး မွေး။
လင် နဲ့ ကွဲ။
ပြီးတော့ မင်းသား နဲ့ ညားကြ လေသတည်းပေါ့။
မင်းသားမ နေနဲ့ 
သူ့ လင် နဲ့ ကွဲ မယ့်အချိန်ကိုတော့
စိတ် ရှည်လက် ရှည် စောင့်ပေဦးပေါ့။
ဒီကြားထဲ အလွန်အကျွံ တွေ
ခင်ဇော် says: အားရထာ
ဒင်း ကို ဒီလောက်တော့ ပြောသင့်တယ်။
ဖားသက်ပြင်း says: ချဉ်​ထှာ
nicolus agral says: မှတ်ဟ ကိုဂီ
pooch says: အေးတာပဲ အဲ့လို ဆုံးမပေးလိုက်စမ်းပါ
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဟိဟိ ဘက် မိုက်ချက်။ မှန်လွန်းလို့သွေးတောင်ထွက်တယ် ဘက်ရယ် ခိခိ
Ko chogyi says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: လွမ်းတော်မူလို့ စာကိုစီတယ်..
ဒီဇာတ်ရယ်.. ဘယ်မှာ ဆုံးပါမယ်…
Mike says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1880
ကိုရင်စည်သူ says: အဲ့လောက်ချစ်ဖို့ကောင်းတာ ဘာလို့ ရအောင် မယူဒါလဲဂျာ..
Foreign Resident says: အီးးးးးးးး ၊ အားကျ ထှာ မေါင်ဂီ ရယ် ။
သာမီးလေးဒွေ အညားဂျီးက ဝိုင်းပြီး အချစ်ခံရတဲ့ ဘဝ ။
အဘ မှာတော့ ၊ ဒီတစ်ယောက်ကဘဲ ချစ် ၊
အဲဒီ တစ်ယောက်ကိုဘဲ ယူလိုက်ရတဲ့ ဘဝ ။
ဇတ်လမ်းက ရိုးလိုက်တာ ။
့တောက် ၊ ပြန်ငယ်ချင်စမ်းပါဘိ ။ ဟီ ဟိ ၊ နောက်ထှာ ။
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နင်အသီးကွဲဒေါ့ ငဒို့လဲပွိုင့်တိုးဒါပေါ့ဟယ်။ ကောင်းပါဒယ် အသီးများများကွဲပါဇီတော်
Ma Ma says: ကိုယ်တိုင်လည်း မစား
ဇာတ်လမ်းပမာ နားဆင်စရာ ကွက်စိပ်ဟောသူ ဖြစ်ရရှာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: မနက်က အချိန်မရတော့ လို့ ကိုချော စာကို ဖတ်ပြီး ပြုံးရုံ ပြုံးသွားခဲ့တာ။
ကျန်​ကိုယ်​​တော်​​လေး ရဲ့ ပါပါး ကိုတော့ ရှေ့နေလိုက်ပေးဖို့ ကြောက်ပါရဲ့။
သို့ပေသည့် အခြေအနေ လေး ကိုတော့ ရှေ့နေလိုက်ခွင့်ပြုပါ။
အခု မောင်ဂီ ပြောနေတဲ့ အကြောင်းက အတိတ် ကို ပြန်ဖတ် နေတာလို့ သတ်မှတ်လို့ ရမှာပါ။
ရှင့် အစ်မ နားလည် မိတာကတော့ အဲဒီ အတိတ်ထဲ မှာ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် ခင်တွယ်မှု သံယောဇဉ် သန့်သန့်လေး ဘဲ တွေ့ပါတယ်။
နောက် အပိုင်းတွေမှာတော့ မသိ။
အခုထိတော့ တဏှာပေမ နွယ်တဲ့ ချစ်ခြင်း အကြောင်း မတွေ့သေး။ (နောက်မှ ဖောက်လာရင်တော့ မသိ)
မကြာခင်မှာ သူကြီး နဲ့ စစ်ခင်း မဲ့ အေအိုင် ရဲ့ အလို အရ ဆိုရင်တော့
ကျား နဲ့ မ အင်မတန်ရင်းနှီး တဲ့ ကျောင်းသွားဖော် သူငယ်ချင်း၊ မိဘ ချင်းလဲ ခင်မင်၊ အချင်းချင်းလဲ သံယောဇဉ်ကြီး၊ နားလည်မှု ရှိ၊ ကြားဖျက်မျဉ်း လဲ မတား ရင် လင်မယား အဖြစ် ပေါင်းသင်း ကြစေသတည်းပေါ့။
လက်တွေ့ လောကထဲ မှာတော့ ဒီအတိုင်း အကြင်လင်မယား ဖြစ်တာတွေလဲ ရှိ။ မဖြစ်ခဲ့ ဘဲ တစ်ခြားသူ တွေ နဲ့ ဆုံ သွားတာလဲ ရှိပေါ့။
အစ်မ ဦးလေး အငယ် တက္ကသိုလ် တက်တော့ သူ့မှာ အင်မတန် ရင်းနှီး တဲ့ သူငယ်ချင်း မ လေး ရှိခဲ့ တယ်။
နှစ်ဦး အပေါ် က အချက် တွေ အတိုင်းဘဲ။
ဆုံ ချင် ဆုံ နိုင်ဖို့ ရာနှုန်းပြည့်ပေါ့။
အဲဒါကို သမီးရီးစား မဖြစ်ကြပါ။ ခင်တာမှ တစ်တွဲတွဲ။
နောက် တက္ကသိုလ်မှာ ဆရာဖြစ်ကြတော့ လဲ အတူတူ။
နောက်တော့ အဲဒီ အန်တီ မှာ အဖော်တွေ့လာတယ်။
သူ့ ရီးစား ကလဲ သူတို့ နှစ်ယောက် အကြောင်း သိမှသိ။
ပိုးတာ ဦးလေး ကို အရင်ကပ်ရတယ် ပြောတာဘဲ။
ဒီလောက် တွဲ တာ မသိဘဲ နေမလား။
နောက်တော့ သူတို့ အိမ်ထောင်ပြု ပြီး လဲ ဦးလေး က သူတို့ အိမ် ဝင်ထွက် နေတာဘဲ။
ဟို အန်တီ ကလဲ ဂရုစိုက် ဆဲဘဲ။
သူ့ ယောကျာင်္းကြီး ကလဲ ဝန်မတို နားလည်ပုံဘဲ။
ဦးလေးကတော့ တော်တော်လေး ကြာမှ အိမ်ထောင်ပြု တယ်။
သူ့မိန်းမကလဲ သူတို့ နှစ်ယောက် အကြောင်း သိတယ်။
တစ်ခုခု ဆို အဲဒီ အန်တီ ကို တိုင်ရော။
အဲဒါ ကို ဒု သ နသော နဲ့ ညှိ တယ်လို့ ပြောမရ ဘူး ထင်ရဲ့။
သူတို့ နှစ်ယောက် စိတ်ထဲ တဏှာစိတ် မှ မရှိတာ။
နောက် သူတို့ အနေအထိုင် ကလဲ အများ အမြင်မှာ သန့်ရှင်း နေတာ မို့ လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဦးလေး ကို နောက်ပြီး အမြဲ မေးနေကျ။
အဲဒီ အန်တီ က ဒီလောက် ချောပါရက် နဲ့ မကြိုက်ခဲ့ဘူးလားလို့။
သူကပြောတယ်။ စိတ်ထဲမယ် အဲဒီလို တဏှာပေမ ထားလို့ မရဘူးတဲ့။
ချစ်တာမှ ဖြူဖြူလေးချစ်တာ တဲ့။
သူ တစ်ခြား နောက် ပါမှာကိုလဲ ဝန်တိုစိတ် မရှိဘူးတဲ့။
အဲဒီ အန်တီ ပျော်ရင်ပြီးရောတဲ့။ အဲဒီ အန်တီ ကလဲ သူ့အပေါ် အဲ လို စိတ် ဘဲတဲ့။
အဖွား ကတော့ ပြောတယ်။
သူတို့ အရင်ဘဝက အင်မတန်ချစ်တဲ့ မောင်နှမ တွေ ဖြစ်ခဲ့တယ် ထင်ရဲ့ တဲ့။
(သူကြီး ငြင်း ချင်ရင် အဖွား နဲ့ ငြင်းပေရော့)
ဒါကြောင့် ပလေတိုးနစ် အချစ် ဆိုတာ အလကား စာထဲ ရှိနေတာ မဟုတ်လောက်ပါဘူးလေ။
(ဟိ – အရီး ရှေ့နေ ဝင်လိုက် တာ နဲ့ မောင်ဂီ ရဲ့ ဇီးသီးပျက်ပြီ လား မသိ)
kai says: အချစ်သည်..ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းလို့… နားလည်ထားတယ်..။
ဘုရားဟောမှာလည်း.. ၅၂၈ဖြစ်ဖြစ်.. ၁၅၀၀ဖြစ်ဖြစ်.. ရေတွက်တာက… ကိလေသာတွေအနေနဲ့ပါ..။
လူသားတွေချစ်ကြရင်.. (နောင်တမရအောင်) အိပ်ယာပေါ်မှာဘေးထား.. တူတူအိပ်ကြစေလို..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: Love does not claim possession, but gives freedom.
black chaw says: အစ်မလတ် ရေ…။
အစ်မလတ် နမူနာ ပေးသွားတဲ့ ဦးလေး နဲ့ အန်တီ ဇာတ်လေးကို
ထူးအိမ်သင် ရဲ့ မျက်ရည်ဝဲရုံ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးလိုများ
(ရင်မှာ လှိုက်ခုံသွားရုံလေး…အချစ်ဆုံး…ကိုယ်ဘာကိုမှလည်း မမျှော်လင့်ဘူး…
ကြင်နာစွာ ရီဝေတဲ့ အကြည့်လေးနဲ့ နှစ်သိမ့်နေလို့
(ကိုယ်စီ မျက်ရည်ဝဲရုံလေး…ပါပဲကွယ်…ဒီလိုနဲ့ ဝေး…ဝေးရမှာပဲ…
နာကျင်စွာ ကြင်နာသူကို အဝေးက ငေးကြည့်နေရင်း…
အသည်းမှာ မင်းအကြည့်တွေ ရင်ခုန်ရုံလေး ချစ်နေမှာ…
ကြင်နာတာတွေကို ရင်မှာသာ သိုဝှက်ထား
သူတို့ ၂ ယောက် သိတ်ချစ်ပေမယ့်
တိတ်တိတ်မျက်ရည်ဝဲရုံ ကြေကွဲသွားရုံ လေးလောက်နဲ့
အဲဒီ ပလေတိုးနစ် အချစ်အကြောင်း…
ရွာထဲက ကိုကိုတချို့နဲ့ စိတ်ဝင်တစား ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးပါတယ်…။
တစ်ချိန်ချိန်တော့ ပို့စ် အဖြစ်တင်ဖို့လည်း ရည်ရွယ်ထားပါတယ်…။
ဥပမာ – ခိုင်ထူးရဲ့ ဆိုင်သူကိုယ်စီနဲ့ သီချင်းမျိုး…။
ဒါပေမယ့်… မဒမ်ဘလက် နဲ့ သူ့ ရုံးက အဖွဲ့တွေကလည်း
မြန်မာဂဇက် ကို ပုံမှန်ဝင်ဖတ်နေကြတော့
အတော် စွန့်စားရမယ့် ကိစ္စကြီးဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျ…။
အခုတော့ ကျန်ကိုယ်တော်လေးရဲ့ ဖေဖေ ကိစ္စပဲ ဆက်ပြောပါရစေ…။
စောဘွဲ့မှူး သီချင်းလို ဖြစ်နေတာ ခင်ဗျ…။
( အော်…မိန်းမ…မိန်းမ တဖွဖွ
ဂါထာကို ရွတ်ရင်းက ရူးသွပ်ခြင်းဟာ
ဟုတ်ကဲ့ အစ်မ ရေ…။
သေချာတာကတော့ မောင်ဂီ ရဲ့ အချစ်က
အစ်မပြောတဲ့ ပလေတိုးနစ် အချစ် မဟုတ်ပါဘူး…။
ဒင်းအချစ်က မပုလဲ သီချင်းလိုပါပဲ…။
နင် ယောက်ျား ရှိရှိ မရှိရှိပါကွယ် ငါက ချစ်မှာပဲ…။
ဟေးဟေး…ဒင်း…ကို…ညီလေးတစ်ယောက်လို ချစ်လွန်းလို့ သာ
ခင်ဇော် says: မှန်တယ်။
ဒင်းက အတိတ်ကဟာတွေကို ရှေ့မှာယူယူလာပြီး ကွဲကွဲပြတော့ ကျနော်တို့က ကိုယ်တွေ့ဒဏ်ခံလိုက်ရဘီ။
Shwe Ei says: -ဟ၀ှာပိုး..ခေါင်းထဲရောက်သွားရင် ရူးတတ်တယ်တဲ့ခည Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.